Barcelona Oo Heshiis La Gashay Martinez, Man United Oo Sii…
By jojo Last updated Mar 25, 2020
Liverpool Iyo Barcelona Oo Ka Heshiiyey Qiimaha Sadio Mane,…
Inkasta oo uu xidhan yahay suuqa iibka ciyaartoygu oo la filayo in horraanta bisha June uu furmo, haddana kooxaha waaweyn ayaa waxay ku hawlan yihiin sidii ay ciyaartoyga ay doonayaan uga sii dhaadhiciyaan inay heshiisyadooda ogolaadaan, waxaanay qaarkood haddaba lasii gelayaan qandaraasyo hor dhac ah.
Warbaahinta adduunka ayaa waxay si taxani ah usoo bandhigaan xogtii ugu dambaysay ee suuqa iyo dhaqdhaqaaqyada ay kooxuhu samaynayaan, kuwaas oo isugu jira warar xan ah iyo kuwo run ah oo raadkoodu muuqdo.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa iibka ciyaartoyga ee maanta oo Arbaca ah ay qoreen wargeysyada waaweyn ee dunidu:
Barcelona waxay heshiis mabda’ ah la gaadhay weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martínez,waxaanay kaga adkaatay kooxaha Real Madrid, Manchester United iyo Manchester City, laakiin Barcelona waxay tahay inay la xaajooto Inter Milan si ay iskula meel dhigaan lacagta ay ku kala iibsan karayaan xiddigan. (Tuttosport)
Manchester United waxay ku niyad-san tahay inay sii haysan doonto Paul Pogba xili ciyaareedka soo socda ee 20201, maadaama aanay jirin koox waqtigan diyaar u ah inay bixiso lacagta ay United ku doonayso in lagaga iibsado. Real Madrid iyo Juventus ayaa dib uga laabtay damacoodii laacibkan. (ESPN)
Kooxda haysata horyaalka kubadda cagta Talyaaniga ee Juventus, waxay doonaysaa in weeraryahankeeda Gonzalo Higuain ay ku beddesho Gabriel Jesus-ka Manchester City. (Calciomercato)
Barcelona waxay ku dhibaatoonaysaa sidii ay u heli lahayd koox ka qaadata Philippe Coutinho oo kasoo laabanaya Bayern Muncih, laakiin lala xidhiidhinayo kooxaha Chelsea, United, Arsenal iyo Tottenham. Sidaas oo ay tahay, Barcelona waxay la’dahay koox bixisa 80 milyan oo Euro oo si rasmi ah ula wareegta, dhamaan naadiyaddanna waxay ku doonayaan amaah. (Dhawr ilood oo warbaahinta Spain ah)
Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Spain, weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa noqday bartilmaameedka koowaad ee suuqa xagaaga, waxaanu kasoo sare maray weeraryahannada sida Martinez iyo Timo Werner. Madrid waxay sii wadaysaa inay isha ku hayso xiddiga PSG ee Kylian Mbappe oo uu heshiiskiisu dhamaanayo 2021, halka saaxiibkiisa kooxda ee Neymar sidoo kale uu doorasho u yahay.
Napoli waxay dalbadatay in 40 milyan oo Euro ay bixiso koox kasta oo doonaysa weeraryahankeeda Arkadiuzy Milic. Waxa afka hore ee reer Poland doonaya Milan iyo Inter, waxaase uu ku dhow yahay inuu heshiis cusub u saxeexo Napoli. (Calciomercato)
Zlatan Ibrahimovic ayaa ka fiirsanaya inuu ka fadhiisto kubadda cagta, laakiin agaasimaha Milan ee Ivan Gazidis ayaa doonaya inuu sannad kale oo heshiis cusub ah siiyo 38 jirkan. (Corriere dello Sport)
US Covid-19 instances best three million as Trump urges…
Barcelona Oo Kusoo Dhowaatay Real Madrid, Dawakhaaddii VAR
Ivorian Top Minister Amadou Gon Coulibaly dies at 61
Liverpool Oo Guul Raaxo Leh Ka Gaadhay Brighton, Mohamed